Soo -saaraha iyo Warshadda Taxanaha Albaabka Swing Bridge ee ugu jaban | Dijing
Albaabada wax isdaba mariya ayaa ah nooc aad u badan oo ah albaabada iyo daaqadaha suuqa yaala. Waxay tixraacayaan albaabada oo laalayaal lagu rakibay dhinaca albaabka oo u furan gudaha ama dibaddaba. Albaabka luliddu wuxuu leeyahay badbaado sare, iyo waxqabadka iska caabbinta cadaadiska dabaysha ayaa si gaar ah u wanaagsan, waana mid sahlan, ammaan ah oo dabacsan. Marka la barbardhigo, ma qaadato meel bannaan oo badan, sidoo kale waa mid aad u xiran oo ka sii raagaya. Intaa waxaa sii dheer, alaabada albaabka buundada ee jajaban ee ay naqshadeysay shirkadeenu waxay leeyihiin sharraxaad xoog leh, waxay u kala qaybin kartaa booska, si wax ku ool ah u hagaajin kartaa adeegsiga booska, waxayna ka dhigi kartaa naqshadda guud mid aad u qurux badan oo hagaagsan. Waxba ha ahaadeen isku -duwidda guud, ama shaqada, waxay ku gaari kartaa saamaynta dhabta ah iyo darajada.
1. Hawada wanaagsan. Markii ugu horraysay ee la hindisay albaabka laalaabay, wuxuu ahaa qaabkii asalka ahaa ee albaabka. Waqtigaas, waxaa loo baahnaa in si wax ku ool ah looga hortago dabaysha, ciidda, boodhka, ama wasakhda kale inay soo galaan guriga, markaa waxqabadka shaabaddu aad buu u sarreeyey. Albaabada lugaha waxaa lagu ilaaliyaa xabag xabag ah oo dusha ka saaran albaabada kale, kaas oo si wax ku ool ah u kala saari kara marka la isticmaalayo.
2. Ammaan sare. Waxqabadka nabdoonaanta ee albaabbada luliddu wuu ka sarreeyaa kan qaybaha kale. Albaabka lulidda waxaa lagu rakibi karaa quful marka la isticmaalayo, qoysaska caadiga ahna, albaabka luliddu wuxuu ka samaysan yahay qalab aad u adag, oo aad ugu habboon oo ammaan ah in la isticmaalo.
3. Si sahlan loo isticmaalo. Hadday tahay dahaarka heerkulka ama dayactirka maalinlaha ah, way ka sahlan tahay oo waari kartaa.
Hore: Taxanaha Baaritaanka Daaqada
Xiga: Diamond mesh taxane daaqad shaashadda